Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) - Hello Sayarwon
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း)
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) ကဘာလဲ။
မြီးညှောင့်ရိုး(coccyx)ဟာ ကျောရိုးရဲ့ အောက်ဖက်အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲပြင် ဒါမှမဟုတ် လှေကားထစ်လိုမျိုး မာကျောတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပေါ် ချော်လဲကျတဲ့အခါမှာ မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကများသောအားဖြင့် အရိုးထိခိုက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အရွတ်တွေဆွဲ့ဆန့်မိသလို ဖြစ်သွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးတာရှားပါးပြီး မြန်မြန်လည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆစ်လွဲတာကတော့ တော်တော်လေးရှားသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း လွဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်က ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးဖို့လိုလာပါပြီ။ တင်ပါးနှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်း၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် နာကျင်မှုရှိမရှိကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ထိုထိခိုက်မိတဲ့နေရာမှာ အညိုအမဲစွဲနေခြင်း
အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်မယ် ဒါမှမဟုတ် ဖိမိလိုက်မယ်ဆိုရင် နာကျင်ခြင်းပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း
အူရွေ့လျားခြင်းနှင့် ညစ်ခြင်းတို့ကြောင့် နာကျင်လာခြင်း
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အောက်ပါတို့ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ရေကူးကန်ဘေးဘောင်လိုမျိုး ချောတဲ့နေရာတွေမှာ မပြေးပါနှင့်။
မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မှုပေးနိုင်ခြေရှိတဲ့ အားကစားတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အကာအကွယ်သေချာဝတ်ဆင်ပါ။
နှင်းတောထဲသွားတဲ့အခါမျိုး၊ ရေခဲပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ချော်မလဲတဲ့ ဖိနပ်တွေ ဝတ်ဆင်ပါ။
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နာကျင်မှုကများသောအားဖြင့် အရိုးထိခိုက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အရွတ်တွေဆွဲ့ဆန့်မိသလို ဖြစ်သွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးတာရှားပါးပြီး မြန်မြန်လည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆစ်လွဲတာကတော့ တော်တော်လေးရှားသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း လွဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်က ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးဖို့လိုလာပါပြီ။ တင်ပါးနှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်း၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် နာကျင်မှုရှိမရှိကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Tailbone (Coccyx) Injury ( မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်မိမယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် သုံးလေးပတ်လောက် နာကျင်နေပါလိမ့်မယ်။ ကလေးကို အစီတာမီနိုဖန် ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဗျူပရိုဖန်အား ၂ရက်၃ရက်ခန့်ပေးပါ။ ရော်ဘာကွင်း ဒါမှမဟုတ် ကူရှင်ခံထားတဲ့ ထိုင်ခုံကို ပြောင်းပြန်ထိုင်ခြင်းက မြီးညှောင့်ရိုးပေါ်မှာ ဖိအားမသက်ရောက်နေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးအိတ်လည်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အူလှုပ်ရှားမှုတွေက နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် သောက်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ရေနှံဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်း၊၂ဇွန်းလောက် တစ်နေ့၂ကြိမ်ခန့်သောက်ပေးပါ။
မြီးညှောင့်ရိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရဲ့ လက္ခဏာတွေရှိမယ် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုမှသေချာမသိနိုင်တဲ့ နေမထိထိုင်မသာမှုမျိုးကို မြီးညှောင့်ရိုးနေရာမှာ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးပါ။ နာကျင်တာက ထိခိုက်မိတာကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် အခြား ပိုဆိုးတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့်လားဆိုတာကို ဆရာဝန်သေချာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။
• Barton, D. Schmitt. Your Child’s Health. USA, Bantam Books, 2005. Printed books, Page 83.
• Tailbone (Coccyx) Injury. http://www.webmd.com/fitness-exercise/tailbone-coccyx-injury#1. Ngày truy cập 20/08/2016.